Jo Nesbø anoshandura makore makumi matanhatu. Ongororo dzemabhuku ake matsva egore rino | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: (c) Mariola Díaz-Cano. 23/10/2019. Madrid.
Jo Nesbø anoshandura makumi matanhatu nhasi nhasi munaKurume. Munyori weNorway wematsotsi uye enganonyorwa dzevana, musiki weiye mutariri Harry hole, inovhura gumi idzva mune rake rakareba uye rakabudirira basa uye hupenyu. Gore rino, nguva dzose kana zviripo uye zvisina chokwadi mamiriro ezvinhu achibvumira, zvichave zviripo mazita maviri matsva ndiani achasvika pano mushure memakore mashanu anonoka kusvika Ropa muchando (yakarongerwa Chivabvu) uye chimwe chinhu chishoma Pakati pehusiku Zuva (mumatsutso). Ndakatodziverenga kare. Saka ndipo pavanoenda kurohwa kweongororo izvo zvandakanyorera kwavari. Kupa pfungwa yezvaunotarisira uye zvaunotarisira. Kunyangwe iyo yemoto isipo (ikozvino) ndokurova Harry. Asi ngatisiyei zvishoma, rinofanira kuzorora. Kwete iwe, VaNesbø, une mamwe makore makumi matanhatu ekuenda uye zvinotora nguva yakareba sei kuti urambe uchinyora.
1 Ropa muChando - Gumiguru 2015
2 Pakati pehusiku Zuva - Chikunguru 2016
2.1 Kupedzisira kudanana
Ropa muchando - Gumiguru 2015
Ndingadai ndakaiverengera ini mumazuva maviri, nekuti ipfupi uye hazvitore nguva refu. Asi sezvandinowanzoita neNesbø, iwe unoda kuwedzera kuverenga kusvika mukusingaperi uye kupfuura kuti unakirwe nako. Sezvazvave zviri muChirungu, ini ndatova nechero chikonzero. Uye, zvakanaka, zvatove Ndakanga ndamboverenga kumwe kushoropodzwa, yevamwe vakanyunyuta yakanga iri pfupi kwazvo, nevamwe vakati Nesbø yakanga yave nyoro Uye iwe unogona here kuzvipira kuna Harry Hole, nguva. Zvinoita kunge manyepo kuti muverengi wenguva dzose wemunyori uyu (webasa rake rese, kwete Harry chete) anonyunyuta nezvazvo kufungidzirwa unyoro apo kana paine chimwe chinhu chiri VaNesbø ndizvo ROMANTIC Kubva kumusoro kusvika kutsoka, zvisinei kuti akaomarara sei uye psychopathic iye.
Uye ndezvekuti pano zvakanyorwa nyaya huru yerudo nemumwe weavo mavara emumba. murume akarova, Olav Johanssen, zvinoita kunge asina mweya, ndiani anoziva, ndiani ari kutiudza rake rakasviba rekare uye neramangwana remangwana uye chii chinoverenga Zvinoshungurudza. Mukuru wako, mhomho inopisa KuOslo kuma 70s, nguva yeKisimusi isati yatanga, anomuraira kuti abvise mukadzi wake munzira. Dambudziko nderekuti Olav anodanana naye, kana zvakadaro zvinoita, nekuti iri imwe gamba yakatarwa nenjodzi.
Mune mamwe mazwi, isu tine yekare nhoroondo yemhando, yakanyorwa mumunhu wekutanga, uko mavara ese akasviba (kana kwete), hapana kushomeka kweiyo Nesbø twists uye unopera ne yokupedzisira izvo, kunyangwe iwe uchifungidzira izvozvo, haina kumira kana iwe haugone kudzivisa kufara. Kugona kunozivikanwa kwemurume uyu kunzwira tsitsi akanakisa uye akashata emunhu. Kuti akandikochekera zvakare pamwe chete naye prose, nyaya dzavo dzakasviba uye dzakamonyana, asi nazvo kudanana kusviba chokwadi iyo distill.
Akanga ane nguva yose munyika. Ndaifarira kumirira. Ndakafarira iyo nguva pakati pekuita sarudzo uye kuzviita. Aive iwo chete maminetsi, maawa, mazuva eangu anofungidzirwa hupenyu hupfupi pandakanga ndiri mumwe munhu. Ini ndaive mugumo wemumwe munhu.
Pakati pehusiku Zuva - Chikunguru 2016
Moto, mweya, kutenda, kusatenda kuti kuna Mwari, rusaruro, mhosva, kutya, kusurukirwa, rima nekujeka kusingaperi kwezuva repakati pehusiku pakati paNyamavhuvhu, kutya, kuzvipira, kudzikinura, rudo mune zvese zvimiro, baba, kurasikirwa, kurwadziwa, kusava netariro, tariro, kurasikirwa, kukunda, kubiridzira, kugutsa ... Jon hansen -kana ulf, sekutaura kwayo kunodaidzirwa pasi payo chitarisiko zvishoma zvakawanikwa kubva muvhimi asina mhosva uye asina zvaanoziva- inzwe uye anoenda kuburikidza nezvose izvozvo paanosvika mutaundi diki yakarasika kuchamhembe kure kuchamhembe kwenzvimbo dzese dzekuchamhembe. Kunze kwezvo, iyo mharaunda anogara mairi akadaro kuvharwa Chemhondoro ultraconservative. Hansen achawana Knout, UN mwana ane makore gumi, uye su mai Lea, mukadzi ane nhau mudonzvo uzere ne mutambo uye zvinoshamisa.
Kubva ipapo kutiza hapana kwaakaitwa naHansen kunosvikawo kwake zenze. Nhoroondo Yakagadzirwazve muma 70s uye Hansen akagadzira famba kumubati wehove, mukuru weOslo mafia (anga atove panze Ropa muchando), uye ikozvino vari kuzviitira. Zvese zvake kusakwanisa -Kana kuti kusakwanisa - kuuraya. Hansen anozviona sembwende, anorasika moyo kuti akaita zvikanganiso zvakawanda, uye paanosvika kune iyo dongo yakatove muArctic, anonzwa kuti ichave yake yekupedzisira kupukunyuka. Hukama hwake nehuwandu hwehemmetic, asi kunyanya neiyo diki uye inobvunza Knut uye naamai vake vakachengetedzwa asi vanonzwisisa, zvinomumanikidza ita chisarudzo kamwechete zvachose. Kana ku siyana nazvo zvachose.
Y zvakare tinofanira Nesbø zvave chaizvo wekupedzisira Romantic. Chii chinonyora nyaya yematsotsi? Hongu, zvinoita sekudaro, asi pamwe kwete. Zvimwe zvinoitika kwauri kuti, nezera, iwe unofanirwa kutaura nyaya dzepedyo uye dzehukama kwake iye kwete kune muverengi (zvakare mumunhu wekutanga), kana kuratidza about zvitendero y manzwiro. Dzimwe nguva tinozvida uye isu tinongotora nyaya inozivikanwa nekusingaperi asi kuti titaure nenzira yedu, nemaitiro edu, uye vaverengi vaVaNesbes vanotoziva kuti rake rakadii.
Kune rimwe divi Ndakatya zvakanyanya, asi ndakashamisika kuti zvinogona kuitika mushure mekuverenga yapfuura. Pane rimwe divi, Ndakashamisika zvakare nazvo simba kuva kuverenga chinhu chinobva chave chimwe, the kufara kusvikira miniti yekupedzisira, uye izvozvo kubata kunotyisa (mune chimiro chechiitiko chinoshamisa uye chekupedzisira mune rimwe remazita ake, Vanotsvaga) kuti apa inoenda zvakanyanya kune chii Gore mune chimwe chiitiko chakajeka. Zano rekuti ipfupi: kune yakafanana mune iyo bhaisikopo Rob roy.
Vatsoropodzi zvave zvakare izvo zviri kufarira iye wekutanga munhu wematsotsi protagonists asi aine yakanaka kumashure, kuti nyaya dzavo ipfupi kana kufungidzira ... Hazvina basa. Ndiyo Nesbø. Uye ndakaiverenga ichidonhedza, ndichichifarira senguva dzose. Chii chandichaita. Ndinofarira. Pese.
"Ndiri kungotaura kuti chero chinhu chinogona kuvapo," akadaro, "kunyangwe rudo rwekusingaperi."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Jo Nesbø anotendeuka 60. Ongororo dzemabhuku ake matsva egore rino
Kubatsira kwevasina basa